Irreechi 2017: Rakkoo nageenyaa malee, mormii cimaa waliin kabajame – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIrreechi 2017: Rakkoo nageenyaa malee, mormii cimaa waliin kabajame
Roobni ganamaan magaala Bishooftuutti roobaa turu illeen hirmaattoota ayyaana Irreechaa miliyoonaan lakka’aman iddoo horaatti walitti qabamuu hin dhorkine.
Abbootiin gadaa imala miilaa sa’aatii tokkoof walakkaa booda, ganama keessaa sa’aatii 1:30 irratti hora Harsadee gahan.
Abbootiin Gadaas erga horatti irreeffatanii booda kallattiin gara dhufanitti deebi’aniiru.
Humni mootummaa meeshaa waraanaa hidhatees ta’e, hin hidhatiin bakka sirinchaatti hin argamne.
Magaala Sabbataa irraa kan dhufe dargaggoo Alamuu Araggaa, ayyaanni irreechaa bara kanaa gammachiisaa ta’uusaa riportara keenyatti himee jira.
“Ayyaanni irreechaa bara kanaa yaadannoo gaddisiisaa bara darbeen faallaa kan ta’e fi nagaa qabeessaa” kan jette ammoo godina Arsii Lixaa, aanaa Shaashamanee irraa kan dhufte shamarree Hamziyaa Bariisooti.
Baga gammanne baga gammadan sabni keenya guutumaan guututti nagahan bahe galuu isaatif.